Buugga Cusub ee Sirta Guusha W/Q: Hassan Mudane | Laashin iyo Hal-abuur
Buugga Sirta Guusha
“Hadaad rabto in aad la duusho shimbirka hawada sare maraya waqti badan yuusan kaaga lumin digaagga dhulka hoose socda!
Waxaynu marag ka nahay in qof weliba heegan ugu jiro siduu uu nolosha ugu guuleysan lahaa, ugana mid noqon lahaa kuwa guuleystay, hubaal iney guushu tahay mid la wada jecelyahay, balse, wax weliba waxay leeyihiin hab iyo hawl loo maro.
Guusha waxaa barbaryaal guuldaro, haddaba haddii qofku maro waddo ka weecsan ama ka leexsan hooygiisa waxaa hubaal ah inuu ka habaabayo jidkii qumanaa, sidaasoo kale hadduu qofku baal maro marinka hirashada iyo higsiga libinta nololeed waxaa hubaal inuu ka ambanayo dawgii habboonaa .
Aqriste ma doonaysaa in aad barato sida loo guulaysto? Ma rabta in aad hesho buug kaaga sheekeeya guusha aad dalbanayso? Buuggan Sirta Guusha waa bare ku habboon sidii aad ku baran lahayd guusha aad u qalanto, waa hage ku tusiya waddada guusha, waana madal aad u laaban karto marwalba oo aad u baahato in aad wax ka ogaato guusha. Buuggan wuxuu farta kuugu fiiqi doonaa habkii aad ku ugaarsan lahayd guusha aad u baahantahay, wuxuu taabanayaa oo uu kaaga sheekaynayaa sidii aad u guulaysan lahayd, horumar u gaari lahayd, yoolkaagana u xaqiijin lahayd.
Buuggan Sirta Guusha waxaa saldhig u ah labo ujeeddo oo kala ah:
In aad hesho xog muhiim ah oo la xiriira guusha.
Dhaqan gelinta xogtaas adiga oo adeegsanaya hannaanka guusha.
Ugu dambeyntii, buuggan Sirta Guusha waxaan u qoray dhammaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada si ay ugu faa’ideytaan una bartaan xikmadaha ku dhigan buugga.